Soomaaligii ugu Horeeyay ee Loo Xusho ka mid Noqoshada Akadamiyad Caalami ah | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Nuucyada Maskaxda iyo Kobcintooda
7 Tilmaamo Lagu Xoojinkaro Xusuusta
Abshiro Axmed Cabdi, April 26, 2019
Furayaasha Farxada ||Tukesomalism.com
Siddee Loo Baara Creatinin-ta Kujirta Dhiigga Aan Midabka Lahayn Serum?
Qasrigii Mucjisada – Qaybtii 2aad
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, February 5, 2019
Afrikaan.so — May 10, 2020
Qoraaga caanka ah ee Soomaaliyeed Nuurdiin Faarax ayaa ka mid noqday Akadamiyada Mareykanka ee xirfadaha kala gedisan sida suugaanta, sayniska iyo horumarinta danta guud.
Akadamiyadaas oo ah tan ugu faca wayn oo ay ku kulmaan aqoonyahannada ayaa waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1780-kii,iyadoo dadka ku biira inta badan lagu xusho aqoonta iyo in uu yahay qofku mid wax faa’iido leh ku soo kordhiyay bulshada .
Nuurdiin Faarax ayaa ka mid noqnaya 276, qof oo isugu jira hoggaamiyaal, arday saynisyahano, iyo dad ku xeel dheer farshaxanka kuwaas oo loo xushay in ay Akadamiyada oo lagu magacaabo American Academy of Arts and Sciences xubin ka noqdaan.
“Dareenkeygu waxaa weeye intaas oo sano maadama aan soo dadaalayay in ay noqto dedaalkii miro dhal wanaagsan in aan ka gaaray ” ayuu yiri Qoraa Nuuradiin Faarax.
Xulashada dadka ka mid noqonaya
Akadamiyadaan Farshaxanka iyo Sayniska Mareykanka, ayaa ah xaruun qofka lagu qiimeeyo dhowr waxyaabood sida in uu yahay shaqsi aad looga qaddariyo bulshada dhexdeeda isla mrkaana lagu qanco shaqada uu qabtay iyo heerka aqoonta.
Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha xaruuntaan dadka ku xulato in qofku uu sameyay waxyaabo dhaxal noqon kara oo ay ka faa’iideysan karaan jiilasha dambe iyo aragti dheer oo ka qayb ka qaadan karta haggaajinta caqabadaha u baahan xalinta.
“Soomaalida waxey u soo kordhineysaaa in wiilka ama gabadha yar ee hadda bilaabay in ay wax qoraan in ay ku hami karaan in Akadamiga Mareykanka ama Talyaaniga ama kan Faransiiska ama kan Carabta in ay ka qayb gali karaan meel ka sareysa meeshii u sareeysay ruuxii in uu gaaro in uu ku dayan karo Nuuradiinba waa sameyay anna waan sameyn karaa ” ayuu raaciyay Nuuradiin Faarax.
Nuuradiin ayaa ah qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo loo xusho in uu ka mid noqdo Akadamiyadaan inta la ogyahay iyadoo lgu qiimeyay aqoontiisa iyo buugaagta uu qoray.
Akadamiyadaan Farshaxanka iyo Sayniska Mareykanka
“Waxey isii dhiirogelineysaa wixii aan qoray awal wax ka wanaagsan aan qoray dadka aan hadda dhinac ordayo waa dadkii aduunkoo dhan loo maleynayo marka ay timaado qoraalka ” ayuu yiri Nuuradiin .
Nuuradiin ayaa qorey buugaag badan oo ay ku jiraan kuwa ka hadlaya qisooyin ku saabsan Soomalaida iyo arrimaha bulshada sida jaceylka kuwaas oo uu ku qoray Af-ingiriisi.
Tirada la xushay ilaa iyo hadda.
Akadamiyadaan Farshaxanka iyo Sayniska Mareykanka, tan iyo markii 1780-kii waxaa xubno ka noqday dad gaaraya 13,500 oo qof oo ah dad lagu qiimeeyay dadaalkooda aqoontooda iyo horumarada ay ka gaareen dhinacayada nolasha .
Tirdaas la xushay muddooyinka kala duwan kana soo jeeda wadamo kala duwan ayaa la sheegayaa in ay ku yaryihiin dadka Afrikaanka ah ee xubinta ka noqday.
Tags: Soomaaligii ugu Horeeyay ee Loo Xusho ka mid Noqoshada Akadamiyad Caalami ah
Next post Waxay tiri "Cudurka dibirada wuxuu iga dhigay sida in aan uur leeyahay Markasta"
Previous post 8 Gabdhood oo Geesinnimadooda Laga Yaabay Dagaalkii Labaad ee Adduunka?